Faransiiska oo Somaliya ka cafiyay 306 milyan oo dollar (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Faransiiska oo Somaliya ka cafiyay 306 milyan oo dollar (SAWIRRO)
Faransiiska oo Somaliya ka cafiyay 306 milyan oo dollar (SAWIRRO)
Dowladda Faransiiska ayaa maanta Somaliya ka cafisay adduun lacageed oo dhan saddex boqol iyo lix milyan oo dollar, ka dib heshiis ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Heshiiskan ayaa waxaa dhanka Dowladda Somaliya u saxiixay Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, halka dhanka Faransiiska ay u saxiixday Aline Ménager, oo ah Safiirka Faransiiska ee Somaliya iyo Kenya.
Wasiir Beyle oo ka hadlay dayn-cafintan ayaa yiri “Waxaa maanta inoo suuragashay in aan si wadajir ah u saxiixno heshiis dayn-cafin ah, aniga iyo Safiirka Dowladda France ee Kenya iyo Somaliya, Aline Ménager.”
“Dowladda Somaliya waxaa sharaf u ah in si rasmi ah looga cafiyay lacag dhan saddex boqol iyo lix milyan oo dollar ($306 Million).”
“Faransiiska waxa weeye wadanka 4aad ee lacagta ugu badan nagu leh. Wadanka 1aad waa Mareykanka, wadanka 2aad waa Ruushka, halka kan 3aad uu yahay Talyaaniga. Faransiisku wuxuu nagu lahaa lacag dhan 560 milyan, oo maanta 306 milyan oo ka mida uu naga cafiyay.”
Previous articleShariifka oo Baydhabo kula kulmay Madaxweynaha K/galbeed (SAWIRRO)
Next articleMaxaan ka ognahay Sarkaalka Mareykanka ee lagu dilay Somaliya?